यो श्रद्धाको फूल, मेरी माया दिदीलाई.... | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
यो श्रद्धाको फूल, मेरी माया दिदीलाई….
माया दिदी ! आज म एकपटक फेरि आफूलाई स्मृतिको खाडलमा हालेर २६ वर्ष पुरानो घाउ कोट्याउने प्रयत्न गर्दैछु । तिमीले यो धर्तीबाट आफ्नै इच्छाले बिदा लिएको पनि २६ वर्ष पुगेछ । तिमीले दुईवर्षे दूधे बालकलाई दिनुपर्ने आमाको माया र वात्सल्यपूर्ण व्यवहार पाउने उनको अधिकारलाई चटक्कै बिर्सेर आत्महत्याजस्तो कायर र क्रूर निर्णय लिएकी थियौ । कुन–कुन परिस्थिति र घटनाक्रमले तिमीलाई जीवनप्रति अत्यन्त विरक्त तुल्याएर आत्महत्यालाई नै अन्तिम विकल्प ठान्यौ भन्ने कुरा तिमीले यो संसारबाट बिदा लिएको यतिका वर्षसम्म पनि मैले थाहा पाउन सकेको छैन ।
समयको यो कालखण्डमा नारायणी नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तिमीले टुहुरा बनाएर छाडेका सबै (चार) सन्तान आज आफ्नै खुट्टामा उभिएर बाँच्न सक्ने भएका छन् । कान्छा भान्जा सुदर्शनसँग २६ वर्षको उमेरमा हालसालै भेट हुँदा म जति खुसी भएँ, त्यति नै तिम्रो दुःखद स्मृतिले आहत हुन पुगेँ । त्यो दुःखलाई व्यक्त गर्ने कलमबाहेक मसँग अरु कुनै माध्यम छैन । २६ वर्षअघि नै रोएर थाकेका आँखा र सुकेका आँसुलाई पुनर्जीवित गराउन सक्ने अवस्थामा म छैन । लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँ गर्ने ३०–३२ वर्षको उमेरमै जीवनजस्तो मह¤वपूर्ण र फेरि चाहेर पनि नपाउने कुराबाट विमुख भएर बाँचेकाहरुलाई चुनौती दिँदै क्षणिक आवेगमा आएर तिमीले मृत्युलाई नै सहारा ठानेकी थियौ । तिमीले त्यस्तो क्रूर निर्णय नलिएको भए हामी दिदीभाइको तिहार कति रमाइलो हुनेथियो भन्ने कुरा अब म कल्पना मात्र गर्न सक्छु ।
तिमी नाताले आफ्नै सानिमाकी छोरी र उमेरले समकालीन भएकाले होला, तिम्रो यादले मलाई समय–समयमा नमीठोसँग चिमोट्ने गर्दछ । एउटै गाउँमा घर भएकाले हामी बाल्यकालमा विभिन्न बालसुलभ खेलहरु खेल्थ्यौँ । त्यतिखेर जीवन के हो र जगत् के हो भन्ने विषयमा अनभिज्ञ थियौँ । खेल्न र खान पाए खुसी हुने त्यो उमेरलाई आज पनि मेरो सलाम छ !
समयक्रम बित्दै गयो । हामी हुर्कंदै गयौँ । छोरा भएर जन्मिएको कारण मैले पढ्ने अवसर पाएँ । छोरी भएर जन्मिएकै कारण तिमीलाई अभिभावकले त्यो अवसरबाट वञ्चित गराए । घाँसदाउरा, मेलापात र गोठालो बनेर बितेको थियो तिम्रो बाल्यकाल । एक माना खान पुग्नेकी छोरी भएर पनि तिमीलाई स्कुल नपठाउने ती अभिभावक पनि यस संसारमा छैनन् । यदि जीवित हुन्थे भने मैले उनीहरुलाई छोरी नपढाएकोमा आजपर्यन्त गाली गरिरहने थिएँ ।
माया दिदी ! तिमीले किन आत्महत्या ग¥यौ भन्ने कुरा आजसम्म मैले थाहा पाउन सकेको छैन । दुई छोरा र दुई छोरीलाई टुहुरो बनाएर अल्पायुमै तिमीले आफ्नो हातबाट आफैँलाई विसर्जन ग¥यौ । कसैले पक्कै पनि तिमीलाई असह्य पीडा र मानसिक यातना दिएको हुनुपर्छ । यस विषयमा तिमीले कसैसँग केही भनिनौ र तिम्रो आत्महत्याको रहस्य अहिलेसम्म पनि रहस्यकै गर्भमा छ ।
अहिलेको चलनचल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा तिमी त्यसबेला पक्कै पनि घरेलु हिंसाको शिकार भएको हुनुपर्छ । निरक्षर तिमीसँग त्यो हिंसाविरूद्ध प्रतिकार गर्ने क्षमता र आँट नभएर तिमीले आत्महत्याजस्तो गलत निर्णय गरेको हुनुपर्छ । म हरेक दिनजसो आत्महत्याको खबर पढेर विक्षिप्त हुन्छु । अनि, तिम्रो सम्झनाले मलाई दुखाउने गर्छ ।
मानवजीवन मुस्किलले एकपटक मात्र प्राप्त हुने कुरा हो । यसो हेर्दा प्रत्येक मानिसको जीवन संघर्षमय हुन्छ । संघर्षमै जीवनको प्रारम्भ हुन्छ र संघर्ष गर्दागर्दै यसको अन्त्य हुन्छ । के ढाँट्नु र दिदी, मैले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै प्रकारका संघर्ष गरेको छु । कहिले तीन दिनसम्म लगातार अन्न नखाएर भोकभोकै बसेँ त कहिले फुटपाथमा रात बिताएको छु । शिक्षा हासिल गर्नेक्रममा घर छोडेपछि भोग्नु परेका अविस्मरणीय घटनाहरु सम्झँदा अहिले पनि म आत्तिन्छु । तर जति दुःख र हन्डर झेल्नु परे पनि मैले जीवनदेखि हरेस खाइनँ र आत्म–हत्याजस्तो कायरतापूर्ण निर्णय लिइनँ ।
तिमीले आफ्नो अमूल्य जीवन कसरी एकै क्षणको आवेगपूर्ण निर्णयबाट अन्त्य ग¥यौ हौली ? त्यतिबेला तिमीलाई हाम्रो माया नलागे पनि आफ्नै कोखबाट जन्म दिएका चार सन्तान र त्यसमा पनि दुई महिनाअघि जन्मिएको रगतको डल्लोको भने अवश्य माया लाग्नुपर्ने थियो । सन्तानको मात्र मायाले भए पनि तिमी बाँचेकी भए आज हामी कति खुसी हुनेथियौँ ! म र मेरा आफन्तहरु तिमीसँग भेट्न र बोल्न पाउँदा कति खुसी हुन्थ्यौँ होला ! तर, अब यी सब कुरा फगत् कल्पनाको विषय मात्र बनेको छ ।
आज हामीसँग तिमी छैनौ । यति मात्र नभएर तिम्रो तस्बिर पनि हामी कुनै आफन्तहरुसँग छैन । छन् त फगत् स्मृतिका अनाम लहरहरु । नीलो चोली, घरेलुको साडी र सेतो मजेत्रोमा सजिने गरेको त्यतिबेलाको तिमीलाई मैले हृदयको अन्तर्कुनामा लुकाएर राखेको छु । समय–समयमा अझै भन्नुपर्दा दसैँ, तिहारजस्तो चाडपर्वमा अनायास तिमी मेरो स्मृतिमा उदाउने गर्दछ्यौ । त्यतिबेला मेरा आँखाहरु रसाउने गर्दछन् र म कसैले थाहा नपाउने गरी रूमालले आँसु पुछ्ने गर्दछु । वास्तवमा माया दिदी, तिमीले आफूलाई पनि न्याय गर्न सकिनौ र हामी आफन्तलाई पनि वियोगमा डुब्न बाध्य गराएर अन्याय नै ग¥यौ ।
प्रत्येक मानिसको जीवनयात्राको अन्तिम गन्तव्य भनेको शाश्वत् मृत्यु नै हो । हामीले नचाहेर पनि त्यो आउँछ र भोग सकिएपछि जबर्जस्ती उठाएर लैजान्छ । आखिर एक दिन यो संसारलाई छोड्नु नै छ भने हतारको मृत्यु किन ? भन्ने मात्र मेरो प्रश्न हो । तिमीसित आज यतिका वर्षपछि आएर मैले यो प्रश्न किन गरेको हुँ भने अमूल्य जीवनलाई त्यसै कसैले पनि विसर्जन गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । आत्म– हत्याजस्तो कायरतापूर्ण कदम कसैले पनि चाल्नुहुँदैन र त्यो एक प्रकारले पाप नै हो भनेर शास्त्रमा समेत परिभाषित गरेको हामी पाउँछौँ ।
नेपाली समाजमा महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट अत्यधिक मात्रामा प्रताडित छन्् । उनीहरु यो पीडालाई व्यक्त नगरी सहेर बस्न बाध्य छन् । पीडा सार्वजनिक गर्दा आफ्नो भविष्य झन् अन्धकारमय हुने पो हो कि भन्ने अज्ञात भय र त्रासले उनीहरुलाई दिनरात टोकिरहेको
हुन्छ । झन् आजभन्दा २६ वर्षअघिको त्यो नेपाली समाजमा ग्रामीण महिलाहरुको अवस्था कस्तो थियो होला ! हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ । त्यही निर्दयी समाजमा तिमी जन्मेर, हुर्केर छोटो जीवन बाँचेकी हौ । अहिले मेरो चेतनाले तिम्रो आत्महत्याको कारण घरेलु हिंसाबाहेक अरु केही होइन भन्ने ठान्दछ ।
स्कुल जाने उमेरमा पढ्न नपाएको, भोक लाग्दा पेटभरि खान नपाएको र जवानी ढाक्ने एकसरो कपडासमेत लगाउन मुस्किल पर्ने तिम्रो तत्कालीन अवस्थाविरूद्ध मैले त्यतिबेला कुनै भूमिका खेल्न सकिनँ । म आफैँ असक्षम र अवसरहरुबाट वञ्चित थिएँ । आज मसँग भौतिक जीवनमा आवश्यक पर्ने प्रायः सबै कुरा छन् । दिदी, फगत् तिमी छैनौ । यो अभाव र रिक्ततालाई मैले कसै गरे पनि पूरा गर्न सक्नेछैन । त्यसैले, तिम्रो सम्झनामा आज श्रद्धाको फूल चढाएको हुँ । कृपया स्वीकार गर्नू !